I-Journey Towards High Quality Experiences Online - NAB Bonisa Izindaba Ngokusakaza Beat, Umsakazo Osemthethweni we-NAB Show - NAB Bonisa LIVE
Ikhaya » Ukudalwa kokuqukethwe » Uhambo oluya kuma-High Quality Quality Experiences
U-AUTHOR: Stefan Lederer, CEO kanye nomsunguli waseBitmovin
I-multi-screen, izwe le-multi-platform esihlala kulo liye lakhulisa ngokukhulu kakhulu ukutholakala kokuqukethwe kwabathengi bokuqukethwe. Izilaleli manje zingabuka konke kusuka kwimidlalo ebukhoma ukuze zifake amafilimu ubude kwi-smartphone, evumela abathengi ukuba babheke noma yikuphi okuqukethwe, noma iyiphi indawo noma ngasiphi isikhathi. Njengesivumelwano sokuthi ukusakaza okudumile kunjani, i-Super Bowl yonyaka yalula amarekhodi amasha ekusakazeni. Amadivayisi angu-7.5 ayiyingqayizivele asakaze umdlalo - ukwanda kwe-20% ezinombolweni zonyaka odlule. Ukwengeza, amazinga wokuzibandakanya nokuqukethwe okwenziwe ngabadlali abakhulu be-SVOD njenge-Netflix ne-Hulu idlulele. Kwengxenye yesine ye-2018, i-Netflix eyengeziwe Abangu-1.53 million abakhokhelwayo abakhokhelwayo enkonzweni yaso e-US esigabeni sokugcina se-2018, kanti uHulu usanda kufinyelela Ama-25 wezigidi abhalisile ababhalisile
Ukukhula okusheshayo kokusakazwa kokuqukethwe kwevidiyo e-US kuyishintsha okukhulu kusukela ezinsukwini lapho izethameli zizohlangana khona ngokusethwa kwe-TV. Kodwa kusekhona izinselelo ezidinga ukunqotshwa. Ngcono kakhulu, ukusakazwa bukhoma kunganikeza imidwebo ephakeme kakhulu efaka umbukeli ngempela. Kodwa emfudlaneni obi kunawo wonke ungabhekana nokuphikeliswa nokuxubha, okungaba umthombo okwedlulele wokukhungatheka futhi usonakalise isipiliyoni sombukeli ku-intanethi. Isimboni sokuqukethwe sidinga ukubhekana nalolu daba futhi sithumele imifula efana nekhwalithi efanayo nokusakazwa, emizamweni yokuthuthukisa nokwahlukanisa inkonzo yabo kusukela emazweni aqhudelana ngokuncintisana. Abathuthukisi bazodlala indima ebalulekile ekusizeni ukufezekisa lokhu, futhi kuzodingeka bagxile ezintweni zobuchwepheshe ezintathu eziyinhloko.
Ukusakazwa kwekhwalithi ephezulu ye-VOD
Ngenkathi ubuchwepheshe busetshenzisiwe ngabadlali abakhulu be-SVOD okwesikhashana, imboni eminingi ayisekho ukuhambisa ukusakaza okuguquguqukayo ukuze inikeze okuqukethwe okucacile okuphezulu, ngengxenyana ye-bitrate ngokuvamile esetshenziselwa uhlelo lokusebenza. Le nqubo, ebizwa ngokuthi yi-Per-Titration Encoding, isebenzisa ukuhlaziywa kwezinkimbinkimbi zamafa ukuze kubalwe isiteji se-bitrate, okuyisisekelo etafuleni equkethe inhlanganisela ye-bitrate / isinqumo esilungisiwe.
Noma kunjalo, lokhu kulula ukushiwo kunokwenza: amasevisi amaningi ahlobene nevidiyo asebenzise izilinganiso ze-bitrate ngaphandle kokusebenzisa ukulungiswa kokusekelwe kokuqukethwe. Ukusebenzisa i-Per-Title Ukuqopha ngokuphumelelayo, abathuthukisi kudingeka badalule ukulungiswa okungcono kunabo bonke phakathi kwekhwalithi yesithombe ebonakalayo kanye ne-bitrate, futhi kubo bakhulise okuqukethwe ukuze bavumelane nale methrikhikhi. Le ndlela inciphisa kakhulu i-bitrate ngaphandle kokunciphisa ikhwalithi yesithombe, uma kuqhathaniswa namaphrofayela ekhodi yokufaka ikhodi.
Ngalolu buchwepheshe, izinhlangano zobukhulu obuhlukahlukene e-US zizokwazi ukuthuthukisa isevisi yazo, okuholela ekuthuthukiseni okujwayelekile embonini yomthengi kuyo yonke into eyodwa - okuvela kumafilimu avelayo ukuze uphile ezemidlalo.
Sisanda kukhishwa minyaka yonke 'Umbiko we-Developer Developer', lapho saxoxisana nabathuthukisi be-450 emhlabeni wonke ukuba babuze ngezinselelo zabo ezinkulu nezindawo zokutshala izimali ze-2019. Sithole ukuthi i-latency yinkinga enkulu kunazo zonke kubathuthukisi bevidiyo ku-2018 kungakhathaliseki indawo yabo, ukufinyelela kumanethiwekhi okuvinjelwa kakhulu noma indawo yobuchwepheshe.
Ezemidlalo ezibukhoma ngokuqinisekile kuyisicelo esinzima kunayo yonke yevidiyo: ukunyakaza kuyaqhubeka, okusho ukuthi ifreyimu ngayinye izohlinzeka ngemininingwane eyengeziwe uma kuqhathaniswa neyaphambilini; futhi abalandeli balindele ikhwalithi ephezulu. Lezi zinselelo ezimbili zihlanganisa ukwandisa inani lemininingwane edinga ukuthunyelwa phezu kwe-intanethi uma kuqhathaniswa nezinye izinhlelo zokusebenza ezifana nezithombe. Kodwa-ke, amandla okuxhumana nenethiwekhi aphelile, okwenza amaphakethe angakwazi ukunamathela endleleni yawo yokuvuselelwa. Lokhu kuphendukela ekubukeleni, okuyinto engamukeleki ohlelweni olubukhoma.
Kithina, isixazululo sisekuthumele izixazululo eziphumelelayo ze-video analytics ezilungisa izilungiselelo ngesikhathi sangempela, ukwehlisa ukugcina ngesikhathi futhi kugcina ividiyo yekhwalithi eliphezulu. Lokhu kuzojabulisa ngokukhethekile abalandeli abaningi ababukela ezemidlalo ebukhoma kuyi-intanethi, engingaqiniseki ukuthi ngeke bajabule uma bezwa njalo ukujabula komakhelwane wabo olandelayo uTom Brady ngaphambi kokuba babone nokuthinta.
I-AV1 nezwe le-multi-codec
Ukwethulwa kwe-codec entsha njalo kwenza izinhloko. Kodwa-ke, i-AV1 ivele ngenxa yezizathu ezimbili: ifuna ukucubungula i-UHD ngokushesha kunanoma isiphi esinye isisombululo esivela emakethe, futhi yayingekho emidlalweni - ngokuphumelelayo ukulinganisa inkundla yokudlala emisha nokuvumela izinhlangano ezincane ukuba zincintisane nezimboni ezinkulu ngokusebenzisa izindlela ezintsha.
Ukuthuthukiswa okuthakazelisayo kumbiko wethu we- 'Developer Developer Report' kwavela ekuthuthukisweni kwenjiniyela ukuhambisa i-codec cishe cishe kwesithathu kubo bonke abaphenduliwe. Lokhu kungaphezu kokuphindwe kabili izinga lokusetshenziswa okuhleliwe (amaphesenti angu-14) ombiko wethu wangaphambilini, okubonisa ukuthi kungumncintiswano onzima wokwakha ama-codec njengeH264 ne-HEVC. Kuzoqala ukukhishwa izinsiza ze-VoD premium kuqala, okuvumela abahlinzeki ukuba basakaze izindleko zokubala izinsiza ngenkathi imakethe ebanzi iqala ukutholwa kwe-codec. Noma kunjalo, kusencane kakhulu ukushiya ukuthi kuzothatha indawo yamanye ama-codec. Ngokuvamile, i-2019 izosheshisa lo mkhuba ekubhekeni kwezwe le-multi-codec njengoba bonke abahlinzeki bokuqukethwe bekhetha isisombululo esihle kunazo zonke ngezimo ezihlukahlukene.
Kulo nyaka, silindele ukuthi imidlalo eminingi ephilayo izosakazwa kubalandeli, ama-studios amaningi azothuthukisa izinsizakalo zokusakazwa kwe-intanethi kuya kubathengi kanye nevidiyo yomphakathi izoqhubeka nokukhula. Ngokuhlanganisa ukufaka ikhodi engcono nge-latency enciphise kanye nohlu olubanzi lwezinketho ze-codec ongakhetha kuzo, imboni yezindaba izokwazi ukuletha esithembisweni se-video ye-intanethi ye-video evumelana nokusakaza okusemthethweni.
2015 Memezela i-Aurora Health Campaign / I-Colonie ukuncipha kwe-bitrate Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe Ukusakazwa-Abezindaba Komphakathi Ukusakaza-SocialMedia Umnikelo I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor H264 / H265 HDR I-HDR / i-WCG HEVC HEVC / AVC Immersive i-isovideo I-JCT-VC ukunciphisa komsindo UHD / 4K / HD I-Ultra HD Forum i-viarte Umlingisi wevidiyo esingokoqobo virtual Warsaw	2019-04-24
Ngaphambilini: I-RED R3D® SDK Ye-NVIDIA CUDA-Ukushesha Kokusebenza Kokusebenza Manje Kuyatholakala
Olandelayo: I-LiveU eya Power studio ye-TNW TV ku-TNW2019, ngokubambisana ne-Stream My Event